कहाँ चुक्याे कांग्रेसकाे नेतृत्व ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कहाँ चुक्याे कांग्रेसकाे नेतृत्व ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । फाइल तस्विर।
संसदीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको छ। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा समेत पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएपछि नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा पनि कांग्रेसमा चर्चा पायो।
विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने युवा पुस्ता र संस्थापन इतर पक्षको दवाबलाई थेग्न नसकेपछि संस्थापन पक्षले महासमिति बैठक बोलाएर विरोधका स्वरलाई केही मथ्थर पार्ने काम गर्यो। तर महासमितिले दिएको निर्देशनलाई समेत संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा केन्द्रीय समितिबाट असफल बनाउने काम गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद साम्य भएको छैन।
योबीचमा कांग्रेसले संगठन सुदृढिकरण र सरकारका गलत कामको खबरदारी भन्दै पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियना सम्पन्न गरेको छ।
समयक्रमसँगै अब कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनको मिति नजिकिन थालेको छ। आगामी फागुनमा बर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि समाप्त हुँदैछ।
यही सेरोफेरोमा आइबार (आज) नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज सुरु हुँदैछ। अहिले बजारमा कांग्रेसका विषयमा हुने गरेको टिका टिप्पणी र चर्चाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रवेश पाउलान् नै। त्यो भन्दा रमाइलो पक्ष भने संचारमाध्यमा कांग्रेसका नेताले दिने गरेको प्रतिक्रिया र आम जनताले कांग्रेसलाई हेर्ने र बुझ्ने अनि कांग्रेसमाथि भरोसा कसरी गर्ने भन्ने विषय हेर्न लायकको हुनेछ। बजारमा चलेका टिकाटिप्पणीलाई कांग्रेस नेतृत्वले कसरी लिएको छ? अन्य नेताहरुले कसरी लिएका छन् भन्ने विषय पनि चासोको कुरा बनेको छ।
सुशील कोइराला हुँदासम्म जसरी तल्लो तहका कांग्रेसको संरक्षण पार्टी नेतृत्वले गर्ने गरेको थियो, त्यो अवस्था अहिले छैन। केन्द्रमा मात्र होइन जिल्ला तहमै कार्यकर्ता गुटमा विभाजित भएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै सबै कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा आफ्नो गुटलाई मात्र संरक्षण गर्दा देशैभरी पार्टीभित्र विभाजन आएको हो
यी विषयमा नेतृत्वसहित कांग्रेसका नेताहरुको आधिकारिक धारणा पनि बाहिर आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस पुरानो र सशक्त राजनीतिक परिवर्तको संवाहक हो। २००४ देखि २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनसम्म आउँदा सबै परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने देशी र विदेशी सबै राजनीतिक शक्तिले कांग्रेसलाई नै विश्वास गरेको देखिन्छ।
पञ्चायत कालमा पनि नेपालको राजनीति त्रिकोणात्मक थियो। राजा, कांग्रेस र विदेशी शक्तिलाई नै पञ्चायत कालमा विश्वास गरिन्थ्यो। अहिले पनि कांग्रेस, कांग्रेस इतर र विदेशी शक्तिलाई नै मान्यता दिएको अवस्था छ। त्यसमा कांग्रेस सिंगो एउटा मुलुक चलाउन सक्ने राजनीतिक दल हो। यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ। जनता र नेपालका सहयोगी मुलुकले त्यही बुझेका छन्।
अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ। बहुमत ल्याएर एक्लै सरकार संचालन गर्ने आँट नेकपामा देखिएन। क्षेत्रीय पार्टीलाई समेटेर दुई तिहाई बहुमतको सरकार भनेर गठन गरिएको छ। अरु विचार, शक्ति अरु धारलाई समेटेर विश्वको विश्वास जितेर काम गर्नकालागि नै अरुलाई पनि सत्ताको साझेदार बनाइएको हो। कम्युनिष्टको एकलौटी सरकार गठन हुँदा विदेशीले शंका गर्छ, शंकाका कारण सरकार संचालन गर्दा गाह्रो हुन्छ भनेर संयुक्त सरकार बनाएको होला।
अब फेरि कांग्रेस तिरै फर्किऔं। संविधानले जसरी मुलुकलाई संघीय संरचनमा व्यवस्थित गरेको छ, कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई त्यसैगरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले संघीय संरचना अनुसारको संरचना निर्माण गर्नेतर्फ काम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तो संगठनको विधि सम्मत संचालन गर्न र विधान बनाउन यो केन्द्रीय कार्यसमितिले काम गर्नुपर्छ।
त्यसो गर्दा स्थानीय तहमा वडादेखि जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म सबै तहको संगठनलाई समान अधिकार दिएर सदस्यताको अधिकार, संगठनको अधिकार, अनुशासनको अधिकार, भगिनी संगठन निर्माणको अधिकारजस्ता अधिकार दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले तल्लो तहदेखि सबै संठननलाई गठन गरेर केन्द्रसम्म साना र छरितो कार्यसमितिको कल्पना गर्ने हो भने मात्र कांग्रेस भरपर्दो, विश्वाशिलो र सशक्त हुनसक्छ।
त्यसरी भरपर्दो र सशक्त कांग्रेस निर्माण गर्न नेतृत्व फिल्टर भएर शसक्त, अध्ययनशील, इमान्दार, उच्च राजनीतिक छवि र सोचको व्यक्ति आउने किसिमको विधान बनाउन आवश्यक छ।
यी सबै काम गर्न यो केन्द्रीय कार्यसमिति सफल हुनुपर्छ। जथाभावी मनलागि बोल्ने कुरा भन्दा पार्टीको बटम लाइन र त्यही आधारमा बोल्ने र संगठनकालागि काम गर्ने सबै नेताको एउटै लाइन वा गुट निर्माण हुनुपर्छ। अझ कार्यकर्ताको भावना समेट्ने हो भने त वर्तमान नेतृत्व नै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। वर्तमान सभापतिको उचाइ, इज्जत र इतिहासकालागि पनि उहाँले त्याग देखाउनुपर्छ।
अगाडि सशक्त संगठन गर्न र पार्टी संचालन गर्न उच्च चरित्रवान र नैतिकवान नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिने गरी विधान बनाउने काम यो कार्य समितिको बैठकले गर्नुपर्छ। वर्तमान सभापतिले राजनीतिक रुपमा प्राप्त गर्न बाँकी केही छैन । उहाँले पाउनुपर्ने सबै कुरा पाइसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले पदलोलुपता देखाउनु भनेको कार्यकर्ताको आशामा कुठाराघात गर्नु हो।
यदि पार्टीलाई बचाउनको लागि नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस विषयमा पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। पार्टी भएर मात्र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेतृत्व खोजिने हो। पार्टीकै अस्तित्व खतरामा पर्ने भएमा नेतृत्वलाई काखी च्याप्न सकिँदैन।
कार्यकर्ता वर्तमान नेतृृत्व नै परिवर्तन चाहन्छन् र यो चाहनामा कुठाराघात गर्दा ती कार्यकर्ताको मन भाँडिन्छ। कांग्रेस केवल नेतृत्व मात्र होइन तल्लो तहदेखिका कार्यकर्ता र नेताको सामूहिक संगठन हो। संगठनलाई बलियो बनाउन त्यो संगठनको जग नै बलियो हुनुपर्छ । संगठनको जग भनेका कार्यकर्ता हुन्। पछिल्लो समय कांग्रेसका तल्लो तहका कार्यकर्ताले आफैंलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्।
सुशील कोइराला हुँदासम्म जसरी तल्लो तहका कांग्रेसको संरक्षण पार्टी नेतृत्वले गर्ने गरेको थियो, त्यो अवस्था अहिले छैन। केन्द्रमा मात्र होइन जिल्ला तहमै कार्यकर्ता गुटमा विभाजित भएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै सबै कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा आफ्नो गुटलाई मात्र संरक्षण गर्दा देशैभरी पार्टीभित्र विभाजन आएको हो। यो विभाजन कांग्रेसको लागि निकै खतरनाक छ।
यसले पार्टीलाई भित्रभित्रै धमिराले जस्तो कमजोर बनाउँदैछ। एक ढिक्का भएर प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै संघीय संरचनाको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने र अर्को निर्वाचनमा कमब्याक गर्दै देशकै नेतृत्व गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने कांग्रेस यसरी आफू–आफूमै विभाजित हुनु शुभ संकेत होइन। यो केन्द्रीय समिति बैठकले यस विषयमा गम्भीर मन्थन गर्नुपर्छ।
वर्तमान नेतृत्वले पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न नसकेको सत्य लुकाइराख्नु जरुरी छैन। यदि पार्टीलाई बचाउनको लागि नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस विषयमा पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। पार्टी भएर मात्र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेतृत्व खोजिने हो। पार्टीकै अस्तित्व खतरामा पर्ने भएमा नेतृत्वलाई काखी च्याप्न सकिँदैन। पार्टी बलियो रहेमा मात्र नेतृत्व बलियो रहने हो। यस विषयमा यो बैठकले ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।